बृद्ध भत्ताका नाममा सत्ता ? – ebaglung.com
२०७४ असार ३, शनिबार ०४:२८	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
साँचो अर्थमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालका कुनै राजनैतिक दलले ल्याएको नयाँ भिजन होईन । नेपालमा बृद्ध भत्ताको प्रस्ताव कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको हो कि होईन ? उनले मसिक सय रुपैयाँ बृद्ध भत्ताको प्रस्ताव ल्याई रहेकै वेला सत्ताबाट बाहिरिनु प¥यो । त्यस पछि एमाले नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए पछि त्यसको कार्यन्वन भएको जग जाहेरै छ । तर पनि एमालेका लागि बृद्ध भत्ता नै हरेक पटकको चुनावी मुद्धा बन्ने गरेको काग्रेसजनको आक्रोष रहँदै आएको छ । केहि दिन अघि कांगे्रसको चुनावी सभामा यहि विषय जोडदार ढंगले उठाईएको थियो ।
पछिल्लो चरण किशानहरुलाई पनि पेन्सनका नाममा पैसा बाँड्ने प्रस्ताव त्यही माओवादी सरकारले ल्याएको थियो । यसरी जनतालाई प्रत्यक्ष पैसा बाँड्ने प्रस्ताव ल्याउने राजनैतिक दलहरु देशको विकाश र गरिव जनताको समृद्धि चाहनु भन्दा पनि पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने र सधै कुर्चिमा रमाउने खेल खेलिरहेको स्पष्ट हुन्छ । अव जनताले आगमी पाँच वर्षमा कुन पार्टीले देश विकासको कुन योजना ल्याएको छ ? त्यसको आधारमा भोट दिनेकी ? राज्यकोषको ढुकीटी र आफ्नै खल्तीको समेत प्रत्यक्ष पैसा बाँड्नेलाई भोट दिने ? यसमा विवेक पुराउने बेला आएको छ । अमेरिका , युरोप जस्तो विकासित मुलुकबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नकरात्मक असरः भत्ताले बसेरै खाना पुगे पछि त्यहाँका मान्छेले कामै गर्न छाडे , नेपाल जस्ता गरिव मुलुकबाट जनशक्ति मगाउनु पर्ने भयो । म अँस्ती एउटा घरमा पुगे ।
छोराले पनि भत्ता , वुहारीले पनि भत्ता, आमा र वाउले पनि भत्ता , नेपाली सेनामा मृत्यु भएको उनकी बुहारीको उता पेन्सन यता एकल महिला भत्ता । किन काम गर्नु प-यो ? राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा लिई रहेको कुराहरुलाई कसले छानविन गर्ने ? उनैको घर छेवैमा रहेको अर्को घरमा असाध्धै विचल्ली देखें । भत्ता पाउनका लागि न जानी जानी लडेर अपाङ्ग हुन मन लाग्ने न त एकल महिला भत्ता बुझ्नका लागि श्रीमानको हत्या गर्न मन हुने , बृद्ध भत्ता पाउने उमेर कुर्न अझै २० वर्ष कुर्नु पर्ने रहेछ त्यस घरमा । कोखैको त्यस सम्पन्न परिवारमा भने जनही भत्तै भत्ता । यस्तो अन्याय पुर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता पक्कै पनि वैज्ञानिक छैन । यसमा पुनरविचार गरिनु पर्दछ । जो जसले अब बृद्ध भत्ता लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नै मुख्य चुनावी मुद्धा बनाउन खोज्छ भने उसले उसले भत्ताका नाममा सत्ता मात्रै खोजेको छ भन्ने कुरा अवका सचेत जनताले बुझ्नै पर्ने हो कि ?
गल्कोट- १ दुदिलाभाटीमा सञ्चालित साक्षरता कक्षा प्रभावकारी